> Resource > Video > midowdo MKV: Sida loo midowdo MKV Video Files aan Gap
Haddii aad inta badan ka soo dejisan video online, waxaad ka heli kartaa badan oo MKV videos on computer, la mid ah ee Mark dhibaatada:
Waxaan doondoonayaa barnaamij ku milmaan karo files .MKV gooni ah iyo sidoo kale barnaamij isku qaban karto files AVI.
Si loo xaliyo noocan oo kale ah dhibaatooyinka, waxaad u baahan tahay midaynta MKV ama MKV video editor sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Waxaa si toos ah u midowdo karo files MKV oo aan laga badinin tayada video. Si laguugu sahlo, waxa kale oo aad ku milmaan karaa videos ah qaab kale, oo ay ku jiraan oo ay ku jiraan: AVI, MP4, RMVB, FLV, MOV, VOB, 3GP, 3G2, F4V, M4V, Mpg, MPEG, TS, TRP, M2TS, MTS, TP , DAT, wmv, ASF, mod, TOD, iwm Waxaa kale oo la heli karo si ay u gubaan MKV in DVD loogu daawashada TV-ga la Cinwaan. Qodobbadani wanaagsan, sax? Download Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si maxkamad loo saaro lacag la'aan ah.
Hadda eegno sida ay u midowdo MKV video files galay mid ka mid ah oo weyn oo aan farqi ah.
Sidoo kale eeg : midowdo MKV Video iyo Cinwaan galay Mid ka mid ah
Sidee inay la midowdo MKV Files aan galisa
Talaabada 1: files Import MKV inay la midowdo
Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Import" button on suuqa kala aasaasiga ah oo la helo files MKV on your computer, ama uun jiidi oo hoos u files MKV ka Windows File Explorer si User ee Album. In User ee Album, dhammaan faylasha MKV laga keeno lagu soo bandhigi doonaa thumbnails oo si fudud ku daray in ay Timeline ee tafatirka aan isbedel ku files MKV asalka badbaadiyo.
Talaabada 2: Jiid iyo MKV dhibic videos inay la midowdo
Si aad isugu misho files MKV, dooro files MKV badan ee User ee Album iyadoo ay hoos u Ctrl, (waayo files discontinuous) ama wareejin (for files joogto ah) ee muhiimka ah, ka dibna jiidi oo hoos u track video on Timeline ah. Dhammaan files MKV waxaa la ciyaari doonaa mid ka mid kale ka dib markii aan ka dhimman ka dib markii lagu badbaadinayo in computer. By default, guurka ma in lagu dabaqo doonaa, laakiin waxaad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya files MKV shaqsi sida ku cad Tallaabada 3.
Tallaabo 3: Ku dar-guurka ee u dhexeeya videos MKV (optional)
Si loo xakameeyo sida filimka u ciyaara mid ka mid MKV clip ku xiga, waxaad ku dari kartaa kala guurka oo u dhexeeya laba clips. In sidaa la yeelo, isbeddelka in tab-guurka, iyo jiidi kala guurka ah ayaa doonay inay video MKV ah oo u baahan in kala guurka ah. Waxa kale oo aad xaq u riixi kartaa guurka kasta oo menu ah ka muuqan doontaa. Dooro "waxay khuseeyaan dhammaan" iyo "Random in All" ka menu ay ku darto kala guurka isla dhan clips, ama codsan guurka aan kala sooc lahayn.
Talaabada 4: midowdo files MKV mid
Waa fikrad wanaagsan inaad Xiisaha MKV video mideeyey by button Play riixaya. Marka aad ku faraxsan yahay natiijada ay yihiin, guji "Abuur" button inay la midowdo files MKV galay video hal. In tab Qaabka, xulo qaab kasta oo aad rabto in aad ka mid ah liiska. Dhammaan qaabab video caanka ah waxaa taageera. Laakiin kiiskan, qaab MKV shaqeeyaa haddii aad rabto video weli qaab MKV. Si aad u ciyaaro faylasha MKV mideeyey on iPod, iPhone, iPad, doortaan "Device" dooro qalab bartilmaameed ah. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa video isku dhafan si YouTube la xisaabtaada, ama u gubato si DVD inaan la ciyaaro aad DVD guriga ciyaaryahanka.
Features More in Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Haddaba Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) inaad ku biirto files MKV. Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan doonaa ka muuqaalada kala duwan sida hoos.
Fursadaha Fine-habayn ay ka mid yihiin la barbardhigo, dhalaalka, Saturation, cado, iwm
Ku dar-guurka ee u dhexeeya goobaha / clips ka 48 saamaynta
Edit video qalabka tafatirka dhamaystiran sida Split, goo, Dalag, isku beddesha, iwm
Waxaa ka mid ah in ka badan 50 saamaynta muuqaal ah si kor loogu qaado aad videos
Si fudud sameeyo video ah Picture-in-Picture (hab kale si ay u midowdo files MKV)
Ku dar music asalka ama bedeli audio asalka
Ku dar horyaal la saamaynta dhaceen
Sida loo Beddelaan iyo Guba Movies in DVD